राजनीति केका लागि गर्ने ? यो राजनीति गर्नेका लागि मात्र प्रश्न होइन । यो त राजनीति गर्नेलाई सघाउनेहरुका लागि पनि हो । यो प्रश्नले पक्कै नेताका लागि मात्र हो भनेर ठानियो भने गलत हुनेछ । यो प्रश्न नेता र नेतृत्वलाई मात्र होइन । यो प्रश्न त आम नागरिकका लागि हो । आम मतदाताका लागि हो यो प्रश्न । यो प्रश्नको उत्तर खोज्न त्यति सहज भने पक्कै छैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राजनीति केका लागि होला त ? यो प्रश्नको उत्तर पाउन त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन ।
सबै नेताले भन्ने गर्छ । भर्खर राजनीतिमा लागेकाहरुदेखि बरिष्ठ नेताहरुको एउटै उत्तर हुने गर्छ– राजनीति देश र जनताका लागि । वास्तवमा यो उत्तरलाई सही मान्ने हो भने साँच्चै राजनीति देश र जनताकै लागि हुनु ठीकै हो । राजनीतिले देश र जनताको हितका लागि नै गर्ने नै हो । तर वास्तवमा राजनीति देश र जनताकै लागि भइरहेकै छ त ? फेरि अर्को प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीति जनताको पक्षमा छ कि छैन भनेर सोधियो भने ९० प्रतिशत भन्दा बढीले यसको विपक्षमा मत दिनेछन् । जनताले साँच्चै राजनीति आफ्नो पक्षमा भएको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । जनताले मत दिन्छन् । नेता बन्छन् तर आफ्ना समस्याका लागि नेता र नेतृत्वले काम नगरेको तितो अनुभव जनतासँग छ । त्यसैले जनताले यो प्रश्नको विपक्षमा उत्तर दिन्छन् । वास्तवमा नेताले जनताको पक्षमा काम नगरेकाले नै जनताको यस्तो नमिठो उत्तर आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्को जटिल प्रश्न– के नेताले देशका लागि काम गरेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर सहज रुपमा भन्छन् । देशका लागि पनि नेताले काम गरेनन् । अर्को नमिठो उत्तर सुन्दा साँच्चै नेताहरुले कसका लागि काम गरे त ? अर्को प्रश्न उठ्छ । वास्तवमा नेताले देशका लागि पनि केही गरेनन् भनेर भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छाडेका छन् । देश र जनताप्रति नेताहरुले धेरै अनुदार कामहरु गरेका छन् । त्यसैले पनि जनताले नेताप्रति सधै भन्ने गर्छन्– नेताले स्वार्थको राजनीति गरे ।
यो स्वार्थपूर्ण काममा नेताहरु किन लागे होलान ? भनेर अर्को प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । देश र जनताका लागि काम गर्ने कसम खाएकाहरुबाट स्वार्थको राजनीति गर्नु पक्कै पनि स्वभाविक होइन । यो त जनता र देशप्रतिको गद्दारी हो । त्यसैले स्वार्थ देश र जनताका लागि होस । नेताले आफ्ना र आफन्तका लागि स्वार्थ त्यागेर राजनीति गरुन् भन्ने सबैको चाहना छ । यो चाहनामा सबैको ध्यान जान सक्यो भने पक्कै पनि नेपाली जनताले नेताहरुलाई साथ दिने छन् । सहयोग गर्नेछन् ।